अवहेलना मुद्दामा बयान दिन अाज कान्तिपुर सर्वाेच्च अदालत जाने
काठमाडाै । अदालतकाे अवहेलना मुद्दामा बयान दिन अाज कान्तिपुरका सम्पादक र पत्रकार सर्वाेच्च अदालत जाने भएका छन । अदालतको अवहेलना गरेकाे अाराेपमा सर्वाेच्चले दिएकाे ७२ घण्टे पूर्जीका आधारमा कान्तिपुरका सञ्चारकर्मीहरू बयान दिसन लागेका हुन ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको उमेरसम्बन्धी समाचार प्रकाशित गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा कान्तिपुरविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेकाे छ । सरकारी कागजातमै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका चार जन्ममिति लगायतका समाचारले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो। सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उनकै इजलासले एकहप्ता अघि कान्तिपुरलाई बयानका लागि बोलाएको थियो।
कान्तिपुरमा कानूनी व्यवस्था प्रतिकुल, अनर्गल र भ्रामक र प्रधानन्यायाधीश विरूद्द समाचार प्रकाशित गरेकाे भन्दै अधिवक्ता तोयानाथ ढुंगानाले कान्तिपुर विरूद्द सर्वाेच्चकाे अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । यसअघि डा. गाेविन्द केसीले प्रधानन्यायधिस काे शैक्षिक प्रमाणपत्र माग गरेपछि उनलार्इ सर्वाेच्चमा वयान दिन लगाइएकाे थियाे । डा. केसीलार्इ एक रात गिरफ्तार गरेर अवहेलना मुद्दाकाे कारवाही समेत गरीएकाे थियाे ।
कान्तिपुरकर्मी प्रधानन्यायाधीशकाे आदेशअनुसार आज शुक्रबार दिउँसो वयानका अदालत जाने बताइएकाे छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन १८, २०७४११:४७